UHulumeni we-ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge – Ubukhosi
Home/ Ezanamuhla/UHulumeni we-ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge
Esinye sezithombe eziheha izivakashi esingolibo lwakwaButhelezi esikhungweni esigcine umland (Isithombe: nguBanele Bhengu/Ingabadi Media Images)
KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu-Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we-Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo esigcine umlando wakhe esisoLundi. Lokhu kugqame lapho uMntwana wakwaPhindangene, ebenzelwe khona umcimbi wosuku lokuzalwa obuseHhotela iGarden Court Olundi njengoba ehlanganisa iminyaka engama-89.
UMnyango Wezobuciko, Amasiko Nezemidlalo, oholwa uNkk uBongi MaSithole Moloi unqume ukuba ufake isandla esikhungweni iPrince Mangosuthu Buthelezi Museum and Documantation Centre, ukuze sikwazi ukusebenza ngendlela. Lesi sikhungo esisedolobheni oLundi siqukethe wonke umlando othinta impilo yoMntwana kusuka ebuncaneni bakhe kuze kufike ekhula engena esikoleni, nalapho eqhubeka eyofunda ekolishi i-Adams nakwaNgqondonkulu, eFort Hare kuze kube uzihlanganisa nezepolitiki. Akugcini lapho ngoba nokusebenza kwakhe njengeNkosi yesizwe sakwaButhelezi kanye nokuba nguNdunankulu kaZulu nakho kuqoshiwe.
Lesi sinyathelo soMnyango sishayelwe ihlombe kubongwa uNgqongqoshe uMaSithole Moloi ngokuthatha lesi sinqumo sokusebenzisana nebhodi elibhekele ukusebenza kwalesi sikhungo. UMphathiswa uMaSithole Moloi, uthe kube isinqumo esinzima ukuba asithathe ngoba ngesikhathi ephakamisa ukuba kulethwe amagama alabo ababa neqhaza emzabalazweni, abasebenzi boMnyango wakhe uthi babevele balethe amagama abaholi be-ANC kuphela. “Ngabe sengiqhamuka negama loMntwana wakwaPhindangene nokuyinto abasebenzi abaqale bangayinaka bavele bangihleka. Empeleni ngigcine sengixabana nabo ngoba bengakukholwa engangikusho ukuthi ngifisa kube uMntwana wakwaPhindangene esimhloniphayo.
Okunye bebazi ukuthi mina nginguKhongolose ngakho bebevele baqhamuke namagama ezigqalabutho ze-ANC ukuthi kube yizo esizihloniphayo kulolu hlelo esinalo eMnyangweni. Nokho ngashaya phansi ngonyawo ngathi nali igama engibona kufanele sisebenzele kulo ngoba uMntwana naye uyakudinga ukuhlonishwa ngakwenzele isizwe. Namanje ngiyasho ukuthi uyathanda awuthandi kodwa uMntwana wakwaPhindangene ungumholi ofanelwe ukuhlonishwa ngamagalelo abenawo kwezombusazwe. Kuzomele senze isiqiniseko sokuthi umlando awuqophile siyawugcina ukuze isizukulwane esizayo siwuthole. Ukuthi UMntwana ngowaliphi iqembu kakusho lutho, mina ngithunyiwe ukuthi ngihlinzeke zonke izakhamuzi zakuleli,” kusho uMaSithole Moloi enanelwa yihlombe lalabo abebethamele lo mcimbi.
Uthe bazobambisana nebhodi eliphethe iPrince Mangosuthu Museum and Documentation Centre ukuze kuqalwe ukusebenzisana. Nokho akakudalulanga ukuthi lesi sikhungo sizoxhaswa ngemali engakanani. Uthe kokunye abazokwenza ukuthi yonke imiqingo elondoloze ulwazi loMntwana bazoyiqopha ngemishini yesimanje ukuze ingacekeleki phansi. UMntwana wakwaPhindangene wehluleke ukuzibamba ngenxa yokujabula wabonga akangaqeda kuMaSithole Moloi. Uthe isenzo sikaMaSithole Moloi sikhombise ukuba ngumuntu wesifazane ohlakaniphe ngokuseqophelweni eliphezulu kwezepolitiki.
“Kuyangithokozisa ukubona ukubambisana okuqalayo phakathi kwalo Mnyango kuHulumeni wesifundazwe, iKwaZulu-Natal nePrince Mangosuthu Museum and Documentation Centre. Isikhungo ngokwaso besingeke sawuphothula umsebenzi wesizinda senqolobane yamagugu, njengoba kuphoqa, kwezinye zezinto ukunwetshwa kwesikhungo ukuze sikwazi ukumumatha umthamo wawo wonke amarekhodi agcinwe ezindaweni ezehlukene. Ngiyathokoza Ngqongqoshe ukuba wazise ubumqoka bodaba lwalolu hlelo. Ngibonga ngiyanconcoza ukuqhakambisa incazelo yombuso wentando yeningi. Sekunomuzwa wokuthi selidumela emansumpeni ngosizo olunohlonze olungaka oluvela eMnyangweni lohlelo lokonga umlando nokuthi ekugcineni sekuyagcwaliseka. Kunginika ithemba elikhulu ukunikezwa lesi sipho esingaka ngosuku lwami lokuzalwa. Ngiyathokoza Ngqongqoshe, ungumholi omele bonke abantu ngokungacwasi. Ngiyaziqhenya ngokuthi kube inkosazana engumZulu, etshengise ubuholi obuseqophelweni eliphezulu kwezombusazwe. Ngifisa sengathi kungabe ngiyabazi abazali bakho. Ngokuzala wena ngenelisiwe ukuthi isizwe saseNingizimu Afrika abazali bakho basipha utho ngawe Jobe. Ngiyabonga Mondise,” kubeka uMntwana.
Uqhube (uMntwana) wathi lesi yisenzo esihlanzekile sokubusa kwentando yeningi, lapho uHulumeni ehlonipha ngisho umuntu ongekho eqenjini eliwuholayo. Ngaphandle kwalokho uke wathinta umlando wakhe kwezombusazwe, waze waveza ukuthi cishe abantu abaningi ayenabo kabasekho emhlabeni. Uthe lesi sikhungo siyoba usizo nasesizukulwaneni esizayo esiyobe sixoxelwa ngomlando ngoba siqukethe ulwazi oluningi oluyosiza nabacwaningi nabafundi. UMnu uSibusiso Ngcoya oyiMeneja yePrince Mangosuthu Museum and Documentation Centre udalule ukuthi isifiso ukuthi sandiswe lesi sikhungo ngoba sincane kakhulu ukuthi singafaka wonke umlando woMntwana. Uqhube wathi zincane izinto eziwumlando woMntwana ezigcinwe kuso ngenxa yokuba kuncane kwaso. Okunye uMnu uNgcoya akhale ngakho ukungabi nabaxhasi kwalesi sikhungo.
“Izinto eziwumlando woMntwana ezifana nezithombe, izincwadi nokunye okuningi kusagcinwe emzini wakhe. Okungekuhle ngalokhu ukuthi umphakathi ngeke ukwazi ukukufunda noma ukwazi ngakho. Sesibonga khona nje ukuthi uMntwana unesandla esihle sokugcina izinto zisesimweni esihle. Njengoba uMnyango usuzibophezele ngokusondela, isifiso sami ukuthi sinwetshwe lesi sikhungo. Nginethemba futhi ukuthi njengoba sekusondele uMnyango lokhu ukuhamba sikhangeza kuzophela. Sicela nosomabhizinisi ukuthi basondele,” kubeka uMnu uNgcoya. Ube esenxusa umphakathi ukuthi usivakashele lesi sikhungo ngoba sakhelwe wona.
OwayenguMengameli wokuqala waseZambia, uDkt uKenneth Kaunda wathi ngobumqoka balesi sikhungo esiqophe umlando ngoMntwana: “Isikhungo silithuba elikhulu kakhulu ukufunda hhayi nje kuphela ngoMangosuthu Buthelezi isiqu sakhe, kodwa nangezivuvaba eziningi nezindaba esezingumlando ezathinta iNingizimu ye-Afrika kanye namanye amazwe omhlaba. Isikhungo iButhelezi Centre siheha abantu abaningi, ngisho nami ngokuzithoba.”